Mayelana NATHI - ILenda International Tradingl Co, Ltd.
Ukuthuthukisa imikhiqizo yobuchwepheshe obuphakeme bezemvelo bekulokhu kuyindawo ekugxilwe kuyo enkulu yenkampani ye-LENDA.Specialize ekwakheni, ekwenziweni nasekukhangiseni ama-scooters kagesi, ama-e-bikini, ama-hoverboards namabhodi wesikebhe.
Ngokuthuthuka okusheshayo kwemakethe ehlakaniphile, ukuncintisana kwemakethe kuyingozi kakhulu; i-LENDA iyazi ukubaluleka kokuqamba izinto ezintsha, ukuphathwa kwekhwalithi nezinsizakalo zamakhasimende.
Ngo-2017, inkampani ye-LENDA iqashe ithalente lezimboni ezisezingeni eliphakeme ekhaya nakwamanye amazwe, yakhulisa imali ekucwaningeni kwezobuchwepheshe kanye nasekuthuthukiseni, yasungula ithimba lokuxhaswa lobuchwepheshe eliqeqeshiwe nelinolwazi, futhi lazakhela uhlobo lwayo lobuchwepheshe njengesiqondisi salo.
"Okubi kanye nesibopho, nje ukwenza amakhasimende ukumamatheka ukwaneliseka" kuyinto LENDA isevisi wumgomo futhi esinye sezizathu esenza inkampani ethandwa kakhudlwana namakhasimende kunamanye izinkampani kule mboni. I-LENDA igxile ekuthuthukisweni nasekunakekelweni kwezimakethe zaphesheya. Njengamanje, izimakethe zakwa-LENDA zaphesheya sezisabalale kulo lonke elaseYurophu, eMelika, e-Asia nakwamanye amazwe, ukuhlinzeka amakhasimende endawo ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme. Inkampani yethu inamathela kumqondo webhizinisi "Ukusinda Ngekhwalithi, Ukuthuthuka Ngezikweletu, Ukusebenza Ngokuphathwa Abaphathi". Senza imizamo yokuthuthukisa ikhwalithi yomkhiqizo, ubuchwepheshe kanye nokweneliseka kwezinsizakalo, ukudala inani elingenamkhawulo kumakhasimende. Ngesikhathi esifanayo, imikhiqizo yenkampani yethu kukhona Modular, zifane futhi ehlakaniphile ukudala umahluko core ukuncintisana, okuyinto hhayi kuphela inikeza esisebenzayo imibono ukuthuthukiswa, kodwa futhi limelela Ngokuzayo yentuthuko kanye nohlobo lonke ezishintshayo uhlelo ukuhlanganiswa umkhakha ngezinga elithile.